ज्यामितीय शैलीको साथ तपाईंको सेल्फ-पोर्ट्रेट बनाउनुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
जर्ज नीरा | | Illustrator
यी तपाईका बनाउने अनुसरणका लागि यी चरणहरू छन् ज्यामितीय शैलीमा स्वयं चित्रण, प्रयोग गर्दै Adobe Illustrator.
हामी कसरी ज्यामितीय स्वयं चित्रण बनाउने?
1: एउटा फोटो छनौट गर्नुहोस् जहाँ तपाईं अनुहार र काँध देख्न सक्नुहुन्छ।
2: बनाउनुहोस् नयाँ 600x480px कागजात एडोब इलस्ट्रेटरमा र यस क्रममा तहहरूको व्यवस्था गर्नुहोस्:
रेखाचित्र जहाँ तपाइँ दृष्टान्त बनाउनुहुनेछ।
गाईडको रूपमा फोटो राख्नुहोस्।
कागजातको उही मापको साथ स्केच स्केच गर्नुहोस्, यसलाई खैरो पेन्ट पार्दै।
3: सन्दर्भ फोटोको प्रयोग गरेर तपाईको ड्राफ्ट "Eraser" मा उपकरणको प्रयोग गरी डिजाईन गर्नुहोस् "ब्रश"। सिधा लाइनहरू बनाउनुहोस्, सकेसम्म धेरै विवरणहरू सरलीकरण गरी तेस्रो तह मेटाउनुहोस्।
4: इरेजर अस्पष्टता 30०% मा सेट गर्नुहोस् र प्याडलक प्रयोग गरेर तह लक गर्नुहोस्। तलबाट अगाडि चित्र कोर्नुहोस् सुरु गरेर पेन्सिल उपकरण। १pt मोटो र कालो प्रयोग गरेर, कपाललाई सिधा रेखा प्रयोग गरेर रूपरेखा बनाउनुहोस्।
5: आधा शर्ट कोर्नुहोस्, त्यसपछि प्रतिलिपि गरेर अगाडि पेस्ट गर्नुहोस्, "दोहोर्याउनुहोस्" उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् र डुप्लिकेट भएको घुमाउनुहोस्। दुबै पथ छनौट गर्नुहोस् र पाथफाइन्डर> एकता विकल्प विकल्पको क्रममा प्रयोग गर्नुहोस् दुबै आकारहरूमा सामेल हुनुहोस्.
6: यसको प्रयोग गरी शर्टको कलर स्केच गर्नुहोस् बहुभुज उपकरण, त्यसपछि घाँटी को आधार मा आकार राख्नुहोस्।
7: अनुहार आकार को लागी उही प्रक्रिया प्रयोग गर्नुहोस्; अष्टभुज स्केच गर्नुहोस् र माथिल्लो क्रसिंग पोइन्टहरू छनौट गर्नुहोस्.
तिनीहरूलाई सेतो एरोको साथ सार्नुहोस् र / वा तिनीहरूलाई मापन उपकरण प्रयोग गरेर समायोजित गर्नुहोस्, यो ढाँचा नक्कल गर्न र अनुहारको लागि प्रयोग गर्न सम्भव छ, अर्को नक्कलमा, पाथफाइन्डर> माइनस फ्रन्ट प्रयोग गर्दन ढाँचा काट्न।
8: विवरण थप्न, प्रयोग गर्नुहोस् आकार उपकरणहरू र पेन्सिल उपकरण।
9: D थिच्नुहोस् र दृष्टान्त देखा पर्नेछ।
10: ओठलाई हेक्सागन प्रयोग गर्नका लागि। पक्ष तन्काउनुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस् मापन उपकरण ढाँचा परिवर्तन गर्न। त्यसपछि त्रिकोण कोर्नुहोस् र बीचमा पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्।
पथफाइन्डर> माइनस फ्रन्टको प्रयोग गर्नुहोस् ओठको शीर्षमा रहेको त्रिकोण मेटाउन, त्यसपछि प्रतिलिपि गरेर ओठको अगाडि पेस्ट गर्नुहोस्, ढाँचा मापन परिवर्तन गर्नुहोस् केन्द्रका लागि।
11: आँखा बनाउनको लागि अष्टकोणको प्रयोग गरी -Shift + E-Eraser Tool- प्रयोग गरेर ढाँचाको तलको भाग हटाउनुहोस्।
फेरी प्रतिलिपि गर्न Shift + Alt प्रयोग गरेर, मूल आकारको नक्कल बनाएर र प्रयोग गर्नुहोस् पाथफाइन्डरमा माइनस फ्रन्ट, जो आईशैडो हुनेछ, फेरि नक्कल बनाउने बनाउनुहोस्। आईरिसको लागि सानो अष्टकोन स्केच गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई आँखाको तल्लो भाग बनाउनको लागि परिवर्तन गर्नुहोस्।
12: नाकका लागि फेरि अष्टभुज बनाउनुहोस्। बिभिन्न बिन्दुहरू परिमार्जन गर्नुहोस् र नाकको आधारमा केही एch्कर पोइन्टहरू थप्नुहोस्, त्यसपछि विवरण र भोल्युम थप्दै धेरै अक्टगन्स र केहि अन्य साधारण ढाँचाहरू स्केच गर्नुहोस्।
13: चित्रण समाप्त गर्नुहोस्, र color र तपाइँ चाहानु भएको विवरणहरू थप गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Illustrator » ज्यामितीय शैलीको साथ तपाईंको सेल्फ-पोर्ट्रेट बनाउनुहोस्
फोटोशपमा कसरी छवि क्रप गर्ने